musha South AMERICA FOOTBALL STORies Salomon Rondon Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "ndouya aikwanisa". Yedu Salomon Rondon Childhood Story ne Untold Biography Chokwadi kune iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pezita, kusimudzirwa mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu.
Hungu, munhu wose anoziva kuti munhu mumwe munhu anokwanisa kugamuchira kana kubvumira kushanya kwebasa, achimuita mumwe wevarwere vanorwara zvikuru iyo nheyo yekutanga yave yakambova. Zvisinei, vashomanana chete vanofunga nezveSaromon Rondon's Biography iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekudaro, ngatitangei.
Salomon Rondon Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Upenyu Hwokutanga & Mhuri Yacho
José Salomón Rondón Giménez akaberekerwa musi we 16th waSeptember 1989 kuna amai vake, Maitana Giménez (aichengeta imba) nababa, José Rafael Rondón (mudzidzisi wemakemikari) munharaunda yakawanda yeCatia, muCaracas, Venezuela. Pasi pane mufananidzo wevabereki vaSaromon Rondon vane rudo.
Vabereki vaRondon- MAMWE- Maitana Giménez naFATHER-José Rafael Rondón (Chikwereti kuna IG)
Saromon Kuberekwa kwaRondon kwakagadzirirwa kare maererano nababa vake avo vakambopa nhoroondo yezvakaitika mwana wake asati aberekwa.
"Mudzimai wangu, paakanga ane pamuviri akanga ane dumbu guru. Uyewo panguva iyoyo, mukoma wangu-mukoma waive chiyemura Diego Maradona nekuda kweCNCX World Cup. Zvinopera kuti nguva dzose patakaona mutambo apo Maradona akatamba, mwana Soromoni aizopinza muchechi maamai vake. Nemhaka yeizvi, hanzvadzi yangu yakati mwanakomana wangu asati aberekwa aizove mutambi webhuta uye akanga akarurama. José Rafael Rondón anoyeuka.
Rondon akazoberekwa semwanakomana wechipiri kune vabereki vake mumhuri yake yepakati pekirasi yemhuri. Akakurira pamwe nevakoma vake, Gerardo uyo makore matatu ari mukuru uye munun'una wake kidangwe Onlymai uyo ane makore 3 mudiki.
Salomon Rondon Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Basa Rokutanga
Salomon Rondon akatanga kurarama mugumo wake pakutanga nekufamba, kurova uye kurara nebhora usiku humwe. Kwaiva kubatanidzwa kwake mubhora raimubvisa kubva pane zvisarudzo zvisina kunaka zvaaizoita achiri mwana.
"Sezvo ini ndakaberekwa ini nguva dzose ndaifamba nebhora ndichikandira zvinhu zvose. Pazera remakore mana ndakatanga kutamba kuchikoro changu. "
Pazera remakore re4, Rondon akanga agamuchira zvifananidzo zvake kuti ave Rivaldo uye Ronaldo Luís Nazário de Lima.
Chisarudzo chekutamba bhora muchikoro chakauya rimwe zuva apo mudzidzisi waRondon akatsvaka kukurudzira amai vake, Maitana kubvumira mwanakomana wavo kutamba bhora pamatare ane tsvina echikoro. Akabvuma uye Rondon akatanga kutamba bhora muchikoro masikati. Kubudirira kwake kwekutanga kwemitambo kwakauya panguva yemakwikwi echikoro ake okukwikwidza kwaakakunda mukana wake wokutanga.
Rondon First Sporting Success- Chikwereti kune kirasiGulima
Kunyangwe mushure mokudzoka kuchikoro, mutambo wakanga uchiri chinhu chinodiwa. Izvi zvakamuita kuti anyorese kechikwata chake chechidiki chekugara, San José de Calasanz iyo yakamupa mukana wekutamba nhabvu manheru. Rondon akashandisa bhora sebasa rinopindira kune zvidzidzo, izvo zvakagara zvichidzika pasi pekutarisa kwevabereki vake vakaumba tsika yekuchengetedza photo albamu dzemakomana avo emangwana ekurangaridzwa kwebhola.
Salomon Baba vaRondon vanoratidzira mwana wavo hupenyu hwehupenyu hukuru mune imwe album- Credit to Cronica.
Salomon Rondon Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
Saromon Rondon's passion for soccer yakanzwawo, dzimwe nguva zvisina kunaka mumhuri yake yemhuri. Iyi yakanga iri nguva Rondon nemukoma wake Gerardo vakafarira kuputsa mahwindo eimba yavo, chandeliers uye vases.
Salomon Rondon akaputsa mahwindo eimba yake nebhokisi rake bhora seChi Kid (Chikwereti kuna PixaBay)
Kugamuchira kuvhiringidzika kwakanyanya kubva kuvabereki vake kwakaita kuti amai vake vaudze Rondon kuti aifanira kubhadhara magirazi paanotanga kugamuchira mari semupiki wemhizha.
Kuita Chisarudzo chikuru:
Rondon akaita chisarudzo chakakura paaiva mugore rake rechipiri reCalasanz chikoro chesekondari. Akasangana nababa vake Rafael kuti vawane izvo zvaaifunga kuti kukurukurirana kwakakomba nemudzidzisi wemakemikari.
"Akandiudza kuti aizosiya chikoro kutamba bhora," baba vake vakayeuka.
Salomon Rondon akazoita chisarudzo chisingachinjiki chekusiya dzidzo yake yekoroji uye kuzvipira zvachose kutamba. Chisarudzo chakadaro chakateverwa nekunyora muchechi yekambani yeDokortivo Gulima mushure mokuedzwa kwakabudirira.
Salomon Rondon Deportivo Gulima ID Card (Chikwereti kune ClubGulima)
Salomon Rondon Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Simuka Mukurumbira
Paaiva paDomortivo Gulima, Salomon Rondon akatarira kuEurope. Kuti arambe achidaro, akasarudza kuramba achiita zvekutsvaga kwebhora kuAragua, klabhu yeColumbian ine mukurumbira wokuratidza vatambi kuEurope. Rondon akaita nhanho nokukurumidza muAragua ichiva hurukuro huru yekambani inobudisa nhau.
Salomon Rondon Mugwagwa Wokuenda Mukurumbira (Chikwereti kuna CumpleañosdeFamosos)
Kubudirira kupfuurira kwakamukwidziridza mumutambo mukuru wechikwata mushure megore mushure mekubatana nehuduku hwavo. Rondon pazera re 17 akaita dangwe rake muVenezuelan Primera División. Hazvina kutora nguva asati atora zita rake seanonyanya kurwisa munyika yake.
Saromon Rondon's Success Story naAragua (Chikwereti kuna AS)
Mugore iroro 2008, Rondon hope dzekutamba muEurope dzakave dzechokwadi shure kwekunge atorerwa UD Las Palmas muSpain. Kutaura pamusoro penguva iyoyo yepfungwa yekubva kumba, Rondon akamboti ...
"Kusiya mhuri yangu kuEurope ndicho chinhu chakaoma zvikuru. Mashoko omukadzi wangu ekupedzisira kwandiri aiti 'Enda!' Amai vangu vakanga vachichema paakataura izvozvo. Ndakachema zvakare. Ndaingova 19 panguva iyoyo. Ndakanga ndisingazivi - Ndakanga ndisingazivi kuti ndingagadzira sei ... Ndaigara ndiri pa Skype ndichiti, 'Amai, ndingagadzira sei pasta ?!' Amai vangu vakanga vakaita sekuti, 'Isa mvura muhomwe uye ...!' "
MuEurope, Rondon akafambira mberi uye akazviwana achitamba kuMalaga. Haana kutora nguva yakareba kuti aite pfungwa nekambani. Waizviziva here? Paaiva paMalaga, mumwe munhu anokwakurira Rondon akadzingwa nechinangwa chekuchengetedza zvinangwa Ruud van Nistelrooy kumushungurudza uye gare gare kumumanikidza kuti aende mujeri.
Salomon Rondon Achikwira Mukurumbira (Chikwereti kune TalkSports uye 20Minutos)
Salomon Rondon akaenderera mberi kuva gamba kubva mushure mekunge apedza kukwegura Ruud van Nistelrooy. Achitenda fomu yake, Akapfuura zvinyorwa zveLaLiga vavariro dzakaitwa naimbova weVenezuela Juan Arango. The "Muponesi weMalaga"Sa iye akadanwa akazviona achibatsira chikwata cheSpain chinopukunyuka.
Salomon Rondon anova Muponesi weMalaga (Chikwereti Instagram)
Salomon Rondon Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Rudo rwaSaromon Rondon nderimwe runopukunyuka kuongororwa kwevanhu vose nekuda kwekuti rudo rwake rworudo runomutambo-rusununguko. Pamberi neAvenezuelan vakabudirira, kune mudzimai anofadza uye vana vakanaka.
Salomon Rondon Wife nevana (Chikwereti kuna Salomon Rondon's Instagram)
Saromon Rondon semunguva yekunyora anorarama muNewcastle iyo yaanotenda kuti i "guta guru"Kumhuri yake. "Mudzimai wangu, vana vangu vaviri, amai vamwene vangu, muzukuru wemudzimai wangu, ndine mhuri yangu yakandipoteredza," akati Rondón,
Salomon Rondon Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Upenyu hwehupenyu
Kuziva upenyu hwaSaromon Rondon huchakubatsira kuti uwane mufananidzo wakazara waiye. Kutanga, iye mumwe munhu ane nzira yehupenyu hunoita kuti ave nechokwadi chokuti anoisa chisarudzo chekutsvaga mufaro kupfuura zvinhu zvose.
Kubva pakutsvaga zvinangwa mumutambo, Salomon Rondon anoshandisa nguva inokosha achiita basa rebhosi iro iye anotenda rinowedzera simba rake repamusoro. Pasi pane vhidhiyo yekushanda kwakadaro.
Rondon anotenda mubhodhi sechitambo kuzvidzivirira. Mune vhidhiyo iri pasi apa, anokwanisa kuisa bhokisi mumashandiro akanaka kuburikidza nekudzidzisa mwana wake nzira yekuzvidzivirira nayo uye kusamboshandisa shanduro senzira yekutsvaga matambudziko.
Kubva kuSt James 'Park, achitamba nevana vake uye bhomba, Rondon anowana mufaro mukufamba nembwa yake.
Salomon Rondon uye Imbwa yake (Chikwereti kuna The Mirror).
Salomon Rondon Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Upenyu hweMhuri
Kuva muchengeti wenyika yake mukurumbira uye wega Premier League vamiririri zvechokwadi vanoita mhuri yaSaromon Rondon uye nyika yake yose vanhu vanozvikudza pamusoro pake. Salomon vabereki vaRondon nehanzvadzi vanoramba vari muCaracas, Venezuela iyo panguva yekunyora. Iyi ndiyo nyika isina kugadzikana mune zvezvematongerwe enyika nemhaka yekushungurudza kwematongerwe enyika uye zvematongerwo enyika.
Saromon Nyika yeRondon muTurmoil (Chikwereti kuna NBC News uye Khilafah)
Nekutengesa kwenyika kubuda kunze kwekutonga, hutsotsi hwechisimba hwakazara uye kuwedzera kwekuuraya kunotyisa kuVenezuela. Kutaura pamusoro pezvipingamupinyi zvevatorwa, Rondon akamboti;
"Vashomanana chete vanoziva kuti mhuri yangu ndeyei uye ini ndinoedza zvakanyanyisa kuti havaonekwi neni - kwete zvachose muVenezuela. Kana ini ndiinavo, nguva dzose iri pamusha wemhuri. Hatimboendi kunze pamwe chete kuti tisafunge. Ndinoedza kuti ndisanyatsozvifungisisa pandinenge ndiripo. "
Pasinei nekuchengeteka kwezvinhu, Rondon haasi kunyara kutora mapikicha nevabereki vake kunyanya baba vake vanodiwa avo kubva pakuva mudzidzisi wemakemikari vakazove purofesa we chemistry mune imwe yezvikoro zvekuVenezuela zvemashure.
Salomon Rondon achizorodza nababa vake (Chikwereti kuna Instagram)
Salomon Rondon Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Untold Facts
Pamusoro peGladiator yake Nickname:
Maererano girazi, Salomon Rondon akambomuratidza kuti anonakidzwa nekudanwa nezita rake rekudanwa ... "Chikara. "Panguva yake paMalaga. Paakabatana neNewcastle, vateki vakatanga kumudana "ndouya aikwanisa"Iyo inonzi zita raanosarudza kupfuura.
"Ndinoda zita rezita rokuti 'Gladiator'. Izvi ndizvo zvandiri kuedza kuva pamiriri. Ndinozarura maoko angu, kutarisa kukura, kutora muviri wangu munzira uye kuedza kudzora bhora kweboka rangu. "
Mushure mokunge vayira vhidhiyo yeGladiator Skills, Rondon akasarudza kuita kuti vateveri vake vakwikwidzane nemubairo kuburikidza nekukumbira kuti vatumire mavhidhiyo ekufambisa kwavo nekunyengedza nechinhu chero chipi zvacho chisiri ⚽ kushandisa hashtag #GladiatorSkillz #Gladiador #Gladiator. Pasi apa Salomon Rondon's Gladiator Video.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinovonga nekuverenga Salomon Rondon Childhood Story pamwe neSepold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.